Bokin' i Jônà - Wikipedia
Bokin' i Jônà
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Jona)
Ny Bokin' i Jôna na Bokin' i Jônasa dia boky ao amin' ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly kristiana. Mitantara ny amin' ny mpaminany Jônà (na Jônasa) izay nirahin' Andriamanitra any Ninive (renivohitry ny Asiriana) mba hampibebaka ny mponina tao nefa nitady lalan-kafa tsy ho any. Niteraka fahasahiranana ho azy izany ka nandeha tany Ninive ihany izy amin' ny farany. Avotra tamin' ny fahatezeran' Andriamanitra ny mponina tao Ninive rehefa nibebaka. Tsy araka ny itiavan' i Jônà azy izany famelan-keloka azon' izy ireo izany. Manambara ny boky fa tsy ho an' ny Jiosy (na Jody) ihany ny famonjena fa ho an' ny olombelona rehetra.
3.1 Nandositra an' Andriamanitra i Jônà (1.1 – 2.9)
3.2 Namindran' Andriamanitra fo ny mponin' i Ninive (3.1 – 4.11)
Ny lovantsofina dia manao an' i Jônà (na Jônasa), mpaminany tany amin' ny taonjato faha-8 tal. J.K., ho nanoratra ny boky mitondra ny anarany. Ny mpandinika ny Baiboly dia mihevitra fa tsy ara-tantara ny zavatra lazaina ao amin' ny Bokin' i Jônà fa am-panoharana. Nosoratana tokony tamin' ny taonjato faha-5 tal. J.K. io boly io. Karazana midrasa (hebreo: midrash) izy io, dia karazan-dahatsoratra mifono fananarana.
Amin' ny teny hebreo dia atao hoe ספר יוֹנָה / Sefer Yônāh ny Bokin' i Jônà. Ao amin' ny Septoajinta amin' ny teny grika izy dia atao hoe Ἰωνᾶς Ϛ / VI Iônâs (ny stigma Ϛ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana fahenina azy).
Azo zaraina roa io boky io:
Nandositra an' Andriamanitra i Jônà (1.1 – 2.9)Hanova
Ao amin' ny tapany voalohany ny boky dia mitantara ny fanirahan' Andriamanitra an' i Jônà ho any amin' ny mponin' i Ninive hanambara ny handravan' Andriamanitra ny tanànan' izy ireo satria tafakatra hatrany amin' Andriamanitra ny zava-dratsy vitany. Niondrana an-tsambo ho any Tarsisy (na Tarsa) mba tsy hanatanteraka ny iraka sy hanalavitra an' Andriamanitra i Jônà. Nisy tafiodrivotra izay nanery ny tantsambo raiki-tahotra hanao filokana hahafantarana ny olona fototr' izao loza izao ka i Jônà no voatondro.
Niaiky ny hadisoany i Jônà ka natsipy tao an-dranomasina araka ny fangatahany ihany. Trondro lehibe iray no nitelina azy.
Namindran' Andriamanitra fo ny mponin' i Ninive (3.1 – 4.11)Hanova
Nangataka famelana tamin' Andriamanitra i Jônà raha mbola tao an-kibon' ny trondro lehibe. Naloan' ilay trondro teny an-tanety izy rehefa afaka telo andro ka nitenenan' Andriamanitra indray mba ho any Ninive. Nitoriteny tao i Jônà ka nibebaka ny mponina. Namindra fo amin' ny mponin' i Ninive Andriamanitra fa tsy nandripaka azy ireo. Tsy nahafaly an' i Jônà ny fiovan-kevitr' Andriamanitra izay namela ny helok' ireo Ninivita ka nanome tsiny azy mafy ka nanafay azy koa Andriamanitra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Jônà&oldid=1041928"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 05:57
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 05:57 ity pejy ity.